Sidee beer wax dhalay dil ula bareeri karaa ubadkiisa? - BBC News Somali
Image caption Booliska Induniisya oo sheegay qaraxi ahayd iney hal qoys ka dambeeyeen
Maalmihii la soo dhaafay weerarro ay Islaamiyiinta sameeynayeen oo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacayey Induniisiya, weerarkaasi oo ay ka dambeeyeen laba qoys iyo carruurtii ay iyagu dhaleen.
Waa dhacda mar la arag ah iney waaliddiin ay carruurta u keenaan si ay ula dhintaan.
Horay waxaa u dhici jiray, in carruurta qoysaskooda laga qafaasho oo daroogo lagu mudo kaddibna lagu qasbo iney weerar gaystaan sida inay is qarxiyaan.
Qaraxan u dambeeyay ayaa ahaa kii ugu dhimashada badnaa mudda 10 sana ah ka dhaca dalkaasi.
Axaddi, hooya ayaa weerar la beegsatay kaniisad, iyada oo ay weerarka ku wehliyaan labo gabdhood oo ay iyadu dhashay, aabbaha iyo labo wiil oo uu dhalayna waxay fuliyeen laba qarax.
Gabdhaha da'idoodu waa 9 jir iyo 12 jir, wiilashuna waxay kala ahaayeen 16 jir iyo 18 jir.
Alexander Raymond Arifianto oo ah khabiir sare oo ka tirsan jaamacadda Nanyag wuxuu BBC u sheegay "Weerarka hannaanka loo fuliyey waa mid cusub- waana arrin ugub ah oo aan horay looga arag Indonesia "
Khamiistina, laba qoys ayaa weeraray saldhig boolis isla magaalada Surabaya, oo ay wehliyeen seddex carruur oo ay dhaleen, iyada oo uu mid ka mid ah weerarka ka badbaaday.
Induniisiya oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan waxaa bilihi ugu dambeeyey ka dhacayey weerarro ay kooxaha Islaamiyiinta ka sameeyaan.
Maxay tahay sababta ay waaliddiintu carruurtooda weerarka ugu wehliyaan?
Yohanes Sulaiman, oo ah khabiir dhinaca ammaanka oo ka tirsan jaamacadda Jenderal Achmad kuliyaddeeda arrimaha dowliga lagu barto oo BBC-da u warramay ayaa wuxuu sheegay "iney carruurta cidna ka shakineyn".
Kooxaha Islaamiyiinta waxay carruurta u door bidayaan maadaamaa ay adag tahay iney carruurtu ay boolisku ka shakiyaan. Guud ahaan carruurtu waxay aad uga hooseeyaan shakiga laga qabi karo marka loo eego dadka waaweyn.
Mr Arifianto wuxuu isaguna taageersan yahay iney saraakiisha amnigu ay raadiyaan o keli ah qof sito waxyaaba shaki abuuri kara
"balse mustaqbalka iyo maalmaha soo socdaba booliska iyo sirdoonkaba waa iney ogaadaan in carruurta loo adeegsan karo weerarrada noocaas ah".
Inta badan weerarrada ismiidaaminta ay sameeyaan kooxaha Islaamiyiinta waxay u adeegsadaan ragga, balse kooxaha ida taalibaan iyo ururka la magac baxay Dowladda islaamiga (IS) waxay u adeegsadaan dumar maadaamaa aan aad looga shakinayn.
Image caption Boolis ku sugan afaafka hore ee saldhigga uu qaraxa ka dhacay
Marki ay dumarka ismiidaaminta loo adeegsado ay noqotay mid iska caadi ah, waxay u sii gudbeen kooxaha iney weerarradooda u adeegsadaan carruurta maadaamaa aan shaki badan laga qabin in carruur la adeegsan karo.
Indunisiya, horay ugama dhicin in dumar iyo carruur ismiidaamin loo adeegsado.
Mr Suleymaan wuxuu leeyahay "dhacdadani Indunisiya ka dhacday waxay na tusineysaa dabacsanaanta nidaamka sirdoonka dalka"
"Dadkuna kama shakiyaan carruurta, kuwa ay iyagu dhaleen ama kuwa la socda waalidkooda laamaha amniguna sida ku habboon uma baadhaan"
Indonesia oo digniin ka soo saartay Foolkaanaha buurta Agung
Arrin noocani ah ma ka dhacday dalk kale?
Weerarro ismidaamin noocan ah oo carrur loo adeegsado ma aha mid cusub balse hannaanka loo adeegsaday ayaa ah mid ay kooxda isku magacaawday Dowladda Islaamka (IS) ay Ciraaq iyo Suuriya ka fuliso, taalibaaniyiintuna ay ka fuliyaan Afqanistan iyo Pakistaan, kooxda Boko Xaraam-na waxay marar badan u adeegsatay carruurta weeradeeda Nigeria.
Tusaale ahaan IS waxay qorataa carruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ah iyo kuwa ku sugan xerooyinka qaxootiga ama waxaa carruurta xoog ku soo kaxeysta dableeyda kooxda ka tirsan.
Waxayna siiyaan tababarro gaar ah iyaga oo ka duubo muuqaallo ay mustaqbalka u adeegsadaan xayasiinta kooxda.
Image caption Dableydu carruurta ay qaraxa u adeegsadaan waxay siiyaan darooga
Ururka Boko Xaraam ayaa sida oo kale caan ku ah inuu carruurta uu u adeegsado qaraxyada.
Kal hore, waxay Qaramada Midoobay sheegtay iney sii kordhayaan carruurta qaraxyada ay u adeegsato kooxda Boko Xaraam.
Mar waxaa dhacday iney bam isku qarxisay gabadh xambaarsaneed ilma yar.
Ma laga yaabaa iney arrintan markale dhacdo?
Sababta ay waaliddiintu u doorteen iney carruurta ay dhaleen ay u adeegsadaan qaraxa ayaa waxay tahay xujo aay jawaab u helin dadka arrimahan ka faallooda.
Mr Suleymaan ayaa wuxuu sheegay "iney jiraan carruur badan oo loo shaqaaleeyey iney qaraxyo ismiidaamin ah ka sameeyaan Indonisiya"
"Carruurta waxay ka soo baxaan dugsiyada mintidka ah ama dugsiyada hoyga waxayna sahlayaan iney si fudud ay u sumeeyaan maskaxda nadiifka ah ee carruurta"
Sidaa darteed, labadi maalmood ee la soo dhaafay weerarradi dhacay waa kuwa ka duwan kuwii hore, Mr Suleymaan wuxuu ka digayaa ineysan ahaan karin tii ugu dambeysay, "carruurta aad adigu dhashay inaad weerar ismidaamin ah u adeegsato waa dhacdo marar dhif ah dhacdo balse been ayay igu noqoneysaa haddii aan idhaahdo ma filayo iney weerarra noocaasi ay markale dhacaan"